Ereg: Lama sii deyn doono kuwa dadka ku dila Masaajidda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ereg: Lama sii deyn doono kuwa dadka ku dila Masaajidda
12th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Wasiirka cusub ee Amniga Qaranka Xukuumadda Soomaaliya Khaliif Axmed Ereg, ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka Wasaaradaasi, kadib markii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu xilkaan umagacaabay 9-Bishan aan kuguda jirno.
Xaflad kooban oo lagu qabtay Dhismaha Wasaarada Amniga ay ka degan tahay Degmada Shangaani ee Gobalka Banaadir, ayaa waxaa kasoo qeybgalay Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo xilka Wasaarada amniga siihaye ka ahaa, xilkaasina ku wareejinaye Wasiirka amniga cusub, Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabadsugida Bashiir Goobe, Taliyaha Waaxda Socdaalka Iyo Jinsiyadaha Dowladda, Wasiir kuxigeenka Wasaarada amniga iyo Saraakiisha ciidamada Nabadsugida Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaandhiga Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo maanta wareejinaye Xilka Wasaarada Amniga oo uu kusime ka ahaa, ayaa madasha ka sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay kujirto Dagaal culus oo ay kula jirto kooxo sida uu sheegay diidan nolosha Bini’aadamka.
Mr Xaamud ayaa xusay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsanayaan madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed ushaqeynaya, sidoo kale wuxuu sheegay in Al-Shabaab xitaa aysan deyneyn, Ciidamada Taraafikada oo ay dilayaan sida uu yiri, waxaana shacabka Soomaaliyeed uu ka codsaday in laamaha ammaanka lagala shaqeeyo sugidda ammaanka Muqdisho.
Wasiirka Amniga Qaranka Xukuumadda Soomaaliya Khaliif Axmed Ereg oo madasha ka hadlay ayaa mahadcelin kadib, wuxuu sheegay in Masuuliyada loo dhiibay ay tahay mid aad uculus oo, isaga oo shacabka Soomaaliyeed weydiistay inay kala shaqeeyaan sugidda ammaanka dalka.
Khaliif Axmed Ereg, ayaa wuxuu sheegay inaysan jiri doonin qof dambe oo Hay’adaha ammaanka Dowladda inta ay gacanta kusoo dhigaan ay siidaayaan, waxaana uu balan qaaday qof waliba oo lasoo qabto in Sharciga la waafajin doono sida uu yiri.
Wasiirka Amniga Soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in iyadoo aan wadashaqeyn laga helin shacabka Soomaaliyeed aysan suuragal aheyn in Wasaarada Amniga ay ku guuleysato xaqiijinta guud ahaan ammaanka dalka.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed Maxamed, ayaa Wasiirka amniga Soomaaliya u magacaabay 9-kii Bishan Khaliif Axmed Ereg, kadib markii rag hubaysan oo Shabaab ka tirsan ay Madaxtooyada Soomaaliya weerar Abaabulan kusoo qaadeen, markii labaad.
Uganda oo xirtay afar Soomaali ah
Shaqaale & Markab Kenyan ah oo u gacan galay Alshabaab